Ambohidratrimo an’Ala : malahelo ny filoha Ravalomanana – MyDago.com aime Madagascar
Ambohidratrimo an’Ala : malahelo ny filoha Ravalomanana	Nihaona tamin’ny vahoakan’ Ambohidratrimo an’Ala, distrika Manjakandriana ireo avy amin’ny birao politika foibe ny antoko Tiako i Madagasikara, notarihan’ny depioté Mamitiana Ravelonanosy, omaly no nanatanterahana ny hetsika lehibe tany an-toerana.
Nambaran’ny solontenan’ ny mponina, izay sady mpiandraikitra nyTIM Ambohidratrimo An’ala, Razafindramiary, fa mbola be ireo tantsaha any no mbola malahelo ny asa fampandrosoana nataon’ ny filoha Ravalomanana ao amin’ity kaominina ity.
“Haverina ny hasin’ny antoko TIM, izay tena manana ny heriny eto amin’ny distrika Manjakandriana, ka hiasa hiaraka amin’ny filoha Marc Ravalomanana ny Antoko”. Izay no nivoitra nandritra ny fandraisam-pitenenan’ Atoa Gaby solontenan’ny Depiote voafidy tao amin’ny distrika Manjakandriana.
Nisy ihany koa ny fanentanana ny vahoaka mikasika ny fitsenana ny Filoha Ravalomanana nentin’ny solontenan’ny vehivavy TIM. Nanome toromarika izy , ary nanafatrafatra mba tsy ho voarebireby, sy voasarik’ireo TIM sandoka ny mponina, rehefa ho avy ny vanim-potoanan’ny fifidianana.
Tamin’ny laha-teny nentin’ny Solombavambahoaka Mamitiana Ravelonanosy,nyfiomanana amin’ny fitsenana ny Filoha Ravalomanana.”Mila miomana isika” hoy izy. Tsy fotoanan’ny tahotra intsony izao, fa ny fiaraha-mientana manomboka eny amin’ny fiaraha-monina no tokony ezahina. Raha ny tokony ho izy, hoy ny Depiote Mamitiana Ravelonanosy, dia tokony ho avy ao amin’ny ankolafy telo izay praiminisitra hipetraka eo. Ny momba ireo gadra politika koa, dia nampita teny sy hafatra ny depiote Ravelonanosy tamin’ireo vahoaka tongabetsaka teo amin’ny kianja, fa ny fivoahan’ireo gadra politika no tokony imasoan’ireo miseho ho tomponandraikitra eo anivon’ny fitondrana avo ny tetezamita.
Tsy handigana ity volana Aogositra ity dia ho tonga ny filoha Ravalomanana. Ny filoha Ravalomanana no tompon’Antoka sy Fahefana ao… « tsy hanao sonia izany sori-dalana aho raha tsy tonga any Madagasikara » hoy ny filoha Ravalomanana Auteur Solo Razafy*Publié le 26 octobre 2011Catégories Politique	2 pensées sur “Ambohidratrimo an’Ala : malahelo ny filoha Ravalomanana”	ranavalona dit :	27 octobre 2011 à 12 h 19 min	Izahay vahoaka tratry ny trindrihazolena koa malahelo ny DADANAY,
soa fa efa tsy ho ela intsony izy dia ho avy fa aza malahelo daholo e!
dada tsy maintsy tonga ! na faly donto na tsy faly,ny marina tsy maintsy mandresy,MINOA FOTSINY IHANY!!!
homba antsika ANDRIAMANITRA!!
vahoaka dit :	29 octobre 2011 à 13 h 43 min	dé endraso eo i pôly!
Précédent Article précédent : Ankolafy Zafy Albert : » Olon’ ny fampihavanam-pirenena, tsy nangalatra bois de rose no mendrika ho praiminisitra « Suivant Article suivant : Lany andro ambony tetezana ny TGV !